Wasiirka gaashaandhigga iyo wafdi uu horkacayo oo gaaray magaalada Baydhabo
Wafdi ballaaran oo uu horkacayo wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa maanta gaaray magaalada Baydahabo ee xarunta gobolka Bay.
Ujeeddada socdaalka wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa lagu sheegay in ay u kuurgeli doonaan xaaladda ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka Bay iyo in la gaarsiiyo ciidanka mushaaraadka ay xaqa u leeyihiin.
Wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sarreeye Gaas Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Wafdigan ka socda dowladda ee gaaray Baydhabo ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka mas’uuliyiinta gobolka Baay iyo ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Baydhabo.
Wasaarada gaashaandhiga ayaa sidoo kale dhowaan mushaaraad ka qeybisay gobolka Gedo, oo ay ku sugan yihiin ciidamo iyo maleeshiyaad dawlada magaceeda ku hawlgala.
Qorshahan ayaa qeyb ka ah dib u habeynta ciidamada dawlada magaceeda ku shaqeeya, waxaana bixinta mushaharkan uu ku soo beegmay labo maalin ka dib markii baarlamaanka uu ogolaaday miisaaniyada cusub ee dawlada ee sanadka 2013 taasoo wax xoogaa kharash kordhin ah loogu sameeyay wasaaradaha gaashaandhiga iyo arrimaha bulshada.